GPS Mobile Mapper 6, xogta ka dambeysa dib u-daabicidda - Geofumed
Mee, 2010 cadastre, GPS / Qalabka, topografia
Maalmo ka hor ayaan aragney sida loo qaado xogta iyada oo 6 Mobile Mapper, hadda waxaan isku dayeynaa in aan isku dayno ka dib. Tani waxaa looga baahan yahay inay ku rakibtay Xafiiska Khariidadda Mobile Mobile, kiiskan waxaan isticmaalayaa 2.0 version kaas oo ka yimid iibsashada qalabka.
Habka ugu wax ku oolka ah ee loogu talagalay waa in la isticmaalo Prolink, inkastoo haddii xogta lagu kaydiyo xusuusinta dibadda, waxay ka shaqeyneysaa kaarka SD-ka oo ka qaadaa faylasha halkaa.
Ku soo gudbinta macluumaadka Xafiiska Maareynta Mobile-ka.
Markii hore waxaan sharxay qaabsamida noocyada kala duwan, dhammaan xogta waxaa lagu kaydiyaa faylasha .shp laakiin faylasha .map waa weelasha lakabka, sidaa darteed haddii faylasha lagu soo rogay isla faylka, oo la furan yahay. awood u lahaan karto lakabyada la qorsheeyey. (Sida gvSIG .gvp ma sameeyo)
Si aad ugu dhejiso Xafiiska Moobilada Mobile, waxaa laga soo xulaa badhanka buluugga ah.
Haddii aadan rabin inaad soo dejiso mashruuca, waxaad abuuri kartaa mid cusub oo leh ikhtiyaarka "Nuevo"Ka dibna ku dheji lakabka.
Sida aad ku arki kartid garaafka kor ku xusan, guddiga bidix waxaad damin kartaa ama u rogi kartaa lakabyada .shp, halka dhinaca midigta waxaad bedeli kartaa hanti buuxda ama midabka khadka ah.
Falanqaynta qoraalka xogta.
Si aad u gudbiso xogta postprocess, badhanka ayaa la isticmaalaa Ku dar xogta qalabka fog, kaas oo aan dooran karno xogta .grw ee badbaadiyay GPS. Kuwani waxay ka muuqanayaan qaybta hoose ee guddiga, labadaba bilowga hore iyo kan ugu dambeeya.
Si loo qaado xogta tixraaca, badhanka soo socda ayaa loo adeegsadaa, kaas oo u oggolaanaya, in mid ka mid ah, si loo helo xogta la heli karo, sida:
Macluumaadka caanaha ee qaabka Ashtech (b *. *)
Xogta cayriin RINEX
Fursadda kale waa inaad ka soo dejiso xogta webka, haddii aan leenahay internet xiriir. Halkan waxaa suurtagal ah in la dhiso tirada idaacadaha ama sidoo kale wareegga kiiloomitir ahaan; markaa nidaamka wuxuu billaabanayaa raadinta xarumaha laga helo macluumaadka la heli karo wakhtiyadaas marka aan qabanno macluumaadka.
Waxaa uu aado, eegaya FTP ee RINEX kor xogta NOAA cad in in America ama Spain samayn lahaa yaabab, sida ay leedahay xarumo dhow adeegaya macluumaad ku saabsan internetka.
Eeg sidaad u siin lahayd ikhtiyaarka xarumaha 7 ee adeegaha IGS ee San Salvador i aqoonsaday, waxaan u maleynayaa inay tahay CNR 168. Waxaa sidoo kale jira laba kooxood oo Guatemala ah iyo labo Nicaragua, iyada oo farqiga udhaxeeya ay yihiin 242 iyo 368. Dhammaan wixii xog ah ee ku saabsan tirooyinka 30, waxay cadahay in mid ka mid ah masaafooyinkaasi aysan aqbalin shaqo culus, xogta laga helo saldhig u dhow ayaa loo baahan yahay.
Markaad doorato midkale si aad u soo dejiso, ka dibna waxaan doorannaa oo badhanaa badhanka download. Halkaas waxaad ka arki kartaa sida miisaanka wakhtigu u dhigmayo xogta, goorta tani la dhamaystiro waa inaad ku riixdaa badhanka Hawlaha bilowga, oo sug inta daaweyntu socoto.
Tusaalahan tusaalahan, waa baarkin baarkin ah oo la qiyaasay afar jeer, laydhka buluugku wuxuu u dhigmaa in la qaado isticmaalka xabbad kasta 1 labaad. Saddexagaladu waxay u dhigmaan xogta dhabta ah, oo ay la socoto qalabka loo yaqaan "Promimstration" ee saxda ah ee millimeterka, isla mudadaas.
Marka fulinta postprocessing, arki doonaa waxa dhaca, iyo hagaajinta this habaysaa shayga lagu kaydiyaa lakabka GIS ah, ama file qaabka, bedelayaan xogta ay joomateri, laakiin aan xogta tabular ay ku kaydsan dbf ah.
Waxaa xiiso leh in masaafada masaafada ee aan lahayn dib-u-dhejinta ay ka yar tahay mitirka, haddii lagu qaato waqtiyo u dhigma. Laakiin qaladaad qaldan waxay u dhexeysaa mitirka 3 iyo 5, markaad sameysid boosteejada ka dib ayaa hoos udhigeysa mitirka.
Uma qalanto koox ka hooseysa US $ 1,500 (Khariidadda Mobil 6) Tusaal labaad ayaa laga soo qaatay jimicsi la soo dejiyey laga bilaabo bogga Magellan. Cadaynta, markaad iibsaneyso koox kuwan ka mid ah, waa inaad waydiiso in dib-u-hagaajinta la dhaqaajiyo, sababtoo ah waxaa si gooni ah loo bixiyaa.
Post Previous«Previous Khadadka 10 Maalin caadi ah
Post Next Roger Penwill, qosolka cadistasNext »
76 Jawaab "GPS Mobile Mapper 6, xogta dib-u-dhiska"
mənim adım Polandadan olan monika lezka. Kredit almağımda kömək edən cənab muller Philipə təşəkkür edirəm. Artıq üç aydır ki, borclarımı ödəmək üçün kredit axtarıram. Görüşdüyüm hər kəs aldadıldı və nəhayət cənab mullerlə tanış olana qədər pulumu götürdülər. Mənə 20 min dollar kredit verə bilərdi. O ka sizə kömək edə bilər. Bir neçə həmkarımın da köməyinə çatdı. Maddi yardıma ehtiyacınız varsa, xahiş edirəm şirkətinə e-poçt göndərin: (muller_philip@aol.com) Düşünürəm ki, o sizə kömək edə bilər. Mənə kömək etdiyi üçün kömək üçün onunla əlaqə saxlayın. Mənə qarşı xoş niyyətini yaymaqla bunu etdiyimi bilmir, amma aldatmacalardan yaxa qurtara biləcəyimə, təqlid edənlərdən ehtiyatlanmağıma və düzgün kredit şirkəti ilə əlaqə qurmağım üçün birn birnmn birnğım üçün birnmn birnğım üçün birnmn birnğım üçün sjn sjn sjnqn üçün, Budur, qanuni və vicdanlı bir şəxsi borc istəyənlərə həvəsləndirici sözləri.
Waa inaad dib u soo celisaa barnaamijka. Waxaan fahamsanahay in bogga bixiyaha inuu awood u yeelan karo inuu soo dejiyo.
Elia Garduza isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibka qaaliga ah, kooxdayda moobiillada mobiil gacmeedku ma leh "MobileMapper Field", maxaa yeelay mid ka mid ah asxaabteyda ayaa sida muuqata iska saaray software-ka aaladda. Xaaladdan oo kale waan sameyn karaa si kooxdeygu ay diiwaangeliyaan isku-duwayaasha oo ay u sameystaan ​​polygons.
john khudbadda jilicsan isagu wuxuu leeyahay:
hello waad iga caawin kartaa sidii aan u xajin lahaa MM6 ee isku duubnaanta guriga
hello waad iga caawin kartaa sida aan u xallin karo MM6 ee isku-duwaha UTM iyo sawirida khariidada
Saaxiibka subixii wanaagsan, miyaad ku jiri lahayd si aad iiga caawiso booska xajinta ee 200?
maaddaama faylasha la abuuray ay yihiin qadar kordhin .csv mana isticmaali karo xalka gnss ...
Miyaad ku soo qabatay xogta munaasabada moobiilka 6?
Xogtaasi ma noqon karto mid dib loo dhigo, maadaama aan fahamsanahay in qalabkani aanu soo qabsanayn khudradda u baahan wax qabadka shaqada.
CENTY00 isagu wuxuu leeyahay:
Salaan subax wanaagsan Waxaan sameynayaa Postprocessing-ka anigoo ka soo dejinaya feylasha qaab qaab rimex ah oo internetka ah iyo markii aan galiyo barnaamijkayga maper mobile, 6 wuxuu igu yiri: «markii aan sameynayo faylka GRW, ma jirin wax vector ah oo la mid ah kan ku habboon qaababka khariidadaha faylka» inkasta oo aan sameeyo Waqtiga xirmooyinka.
Su'aal kale ayaa ah aniga markaan isticmaalayo barnaamijkayga maple-ka ee '6 program', oo aan idhaahdo "ku dar xogta tixraaca cayriin" haddii aan wax ka beddeli karo saldhigyada aniga ii muuqda aniga oo gujinaya "ka barta shabakadda".
Ma fududa in la ogaado. Ka bilow adiga oo hubiya taariikhda aaladda ay leedahay iyo taariikhda kumbuyuutarka
gioberti isagu wuxuu leeyahay:
MM10 waxaan ka baxayaa inaan ku guuleysto in la helo saldhigyo dib u hagaajin ah.
Miisaanka, ka soo qaado faylasha .map, soo qaado feylka qashinka, laakiin ma helin asal.
Maxay noqon kartaa dhibaatada?
Jarmalka Orlando Oyuela Torres isagu wuxuu leeyahay:
Hello: Magaaladayda waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tirakoobka geedaha magaalooyinka, tirakoobkan waxaa loogu talagalay inuu sameeyo shakhsi kasta oo shaxan leh shey 47, kuwa ka mid ah kuwa. sawir (sawir), juqraafi, dherer, iyo kuwo kale oo horey u ahaa xayawaan, qalabkee ayaa igugula talin kara shaqadan, waxaa cad in macluumaadkaasi lagu rakibi doono sawirka satellite-ka. Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada.
Hi Darío. Salaantiin Kolombiya.
Mobilka Mapper 10 oo aan lahayn boostada ayaa la mid ah biraawsar, oo si sax ah u dhow mitirrada 2. Anteenooyinka oo aadan haysan wax horumar ah.
Haa, waxaad isticmaali kartaa saldhigga Promtarka 3, oo la socoshadan xogta MM10.
Anigu ma sheegi karo haddii ay tani tahay mid sax ah, fikirkeyga, ma ahan qodobada Promark3 waa u dhigma laakiin udubdhexaadka Mobile 100.
Waxay kuxirantahay xiisahaaga, halkii aad ka isticmaali lahayd anteeno MM10 + waxaan kugula talin lahaa inaad aado moobiil Mapper 100, oo soo saaraya saxnaanta ka hooseysa 50 sentimitir iyadoo aan boostada la dhigin maxaa yeelay durba waxaa ku jira anteeno gudaha ah. Marka la soo diro ka dib waxaad ku dhowdahay saxnaanta milimetiriga.
Waxaan maleynayaa inaad aragtay maqaalkan, laakiin waan ku faraxsanahay.
G. HABEENKII WANAAGSAN LOO SAMEEYO YAR WAA TASHIGA mar ii lagula talinayaa in ay IIBKA WANAAGSAN A SI LOO GAADHO PROMARK 3 MACLUUMAADKA (GPS lahaa mid ka mid kaliya to post IYO SALDHIGA WITH A
EDINSON RAMOS ACEVEDO isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaad iigu caawin kartaa inaan qaato xogta beesha ee dib u habeynta kaddibna marka la eego xogta ku saabsan rinjiga ee dib u hagaajinta oo aanan ku dhejin karin ninkii sharaxi kara sida loo sameeyo
Juan Carlos de Xalapa isagu wuxuu leeyahay:
Xarunta ugu dhow ee Guanajuato waa Jaamacadda Guanajuato, midka xigta ee 144 km waa Aguascalientes oo ka yimid INEGI
Barnaamijku wuxuu xiraa markaad faylasha ku dhejiso nuqulka Windows ee aad haysato haddii ay tahay VISTA oo isla markiiba isbeddeleyso, daaqadaha 7 ayaa maamula qaabka isku xirka.
Sida kaliya ee lagu cabiro masaafada mobilemmaper waa inaad istaagto mid ka mid ah qodobbada xariiqda sameysa oo aad weydiisato inuu "aado" meesha kale ee aan rabno inaan ogaano masaafada. Waxay leedahay qaab ODOMETER.
si ay u sawiraan ROUTE, maxaa yeelay waxay ka soo qaadaysaa xariiqdaas oo waa wadadaada, waxaana lagu arki karaa google iyadoo la adeegsanayo xaqiiqda sahlan ee dhoofinta KML
sideen u raadsan karaa wadooyinka mashiinka 6 mobile?
-Waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho khariidadaha google, miyay lagama maarmaan tahay in GPS uu ku xiran yahay internetka?
Ma fahmi karno shakigaaga, haddii aad naftaada sharaxdo ...
malaa'ig miguel isagu wuxuu leeyahay:
qof ayaa ii sheegi kara haddii aan la shaqeynayo khariidadaha, waxaan u baahanahay inaan ku rakibo barnaamijyada diskka iyo barnaamijyada lagu rakibo khariidadaha mobile. Waxaan isku dayaa in aan isticmaalo, laakiin khariidaduhu ma muuqdaan.
Franco avila isagu wuxuu leeyahay:
Alludarme salaan kari la 6 mapper mobile ka hor Sidee baad u dhigay aad mashiinka lagu qiyaaso lla mitir oo keliya ii siinayaa coordenas iyo nesesito ulisar habka odometro graisas
Ma jiro Khariidad 7 Mobile, waxaa jira 6, 10, 100.
Ma aha, sida muuqata way dhaawacantay. Iskuday inaad dib udhigto
HI, MAXAA RABTO IN DOWNLOAD xunxunna EE BARNAAMIJKA XOGTA BIXINAYAA A baadi post-processing iyo Casilay?
Felix cediel alcantara isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan soo xigso
GPS Mobile Mapper 7, ka dib qaabaynta xogta, waxaan sugayaa isgaadhsiintaada.
Taleefanka gacanta: 3134521866 COLOMBIA- SOUTH AMERICA.
Jose Luis Perez isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u sameyn karaa postprocess ee ku saleysan xogta ay bixiso RGNA ee Mexico.
Luis Armando isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliyahaygu waxaan jeclaan lahaa in aan ka shakiyo shaki in ay yihiin kuwa soo socda.
Waxaan meesha waa in Guanajuato, Mexico, ayaa sameeyay baadhitaan la mapper mobile 6 dhibaatada waa in postprocessing isku dayaan in ay ka heli saldhigyada dhow on web iyo waa ku saabsan 300 km si kastaba ha ahaatee dhow website-ka oo ka mid ah RGNA ah data INEGI ka goob kasta oo dalka ka waxaa la siiyaa oo isku day in aad isticmaasho xogta this ee software postprocessing i soo sheegayaa in format file ah, waa inaan sameeyaa haddii ay taasi si ay u isticmaalaan xogta RGNA aan la aqoonsan yahay? Oo waxaan kuwan la mid ah si aan baadhitaan xiri kara?
o Miyaa lagama maarmaan in la diyaariyo qaabka feylka lagu soo daabacay RGNA?
Qofna miyuu leeyahay habka jawaabta?
Salaan, mahadsanid in la wadaago macluumaadkaan ...
Waxaan hayaa su'aal, MM markii aan abuuro shaqo cusub
Waxaan helayaa ikhtiyaarrada 2 mid waa inay u shaqeeyaan sidii khariidad iyo tan kale sida dxf
Xulashada khariidaynta macluumaadka la ururiyay ma i siinayaan werwer,
laakiin qaabka dxf haa,
Sida laga soo xigtay wixii aan ka akhriyay mawduucaan, geedi socodka boostada kaliya wuxuu u shaqeeyaa qaabab map ah?
Ma heli karaa xogta kor u qaadida faylka map-ka?
Waxaan mar hore isku dayeyaa in xogta la dhoofiyo dxf khariidad caalami ah mana ku siiso xogtan (z)
Sidaa daraadeed qeexitaankaygu wuxuu noqon doonaa waxa kaliya ee aan ku tuuro isticmaalka antenna helaya haddii shaqadaydu ay bilowdo sida dxf.
Waad ku mahadsantihiin ereyadaada horey u soo dhigtay.
MobileMapper 10 saldhig ma noqon karto. Laakiin way noqon kartaa mid rover ah, xogta ay keydisay MM10 waxay ku jirtaa qaab qaab ah, waxay kujirtaa faylka .map oo loogu yeero tixraac; kuwan ayaa la soo dejinayaa oo la dhajiyay kadib marka loo eego kuwa qaatay MobileMapper 100, Promark ama kuwa kale ee kor ku xusan.
Xogta ah in GPS-ka aasaasiga ahi yahay qaab cayiman (.grw)
Warkii ugu dambeeyey ee Xafiiska Maareynta Mobile horey u taageertay dib u habeynta xogta laga helo MM10
topocolombia isagu wuxuu leeyahay:
MM10 waxay u adeegtaa saldhig ahaan?
Sida ku hoos jira faylasha iyo iyadoo loo kordhinayo kooxda dib u laabashada si ay u sameeyaan geedi socodka boostada?
Ma haysto barnaamij kale oo lagu rakibay
Dekada barnaamijka GPS waa COM0
dekedda qalabka COM1
Waxaan ku waydiiyey, miyaad leedahay barnaamij kale oo marin marin ah oo GPS ah sida MobileMapping ama ArcPad? Sida loo tijaabiyo haddii dhibaatadu guud tahay
Maxay tahay dekedda aad ku habeysey?
Ma haysato qalab dibedda lagu qaabeeyey doorashooyinka?
Anibal isagu wuxuu leeyahay:
Don Geofumadas ayaa iga caawin kara wax uun fadlan.
Waxaan hayaa MM6. Waxaan haystaa kambuyuutarka wareega iyo calaamadaha satalaytka wanaagsan laakiin markaan bilaabo barnaamijka MobileMapper Field daaqad ayaa u muuqata mid ii sheegaysa inaysan ku xirnaan karin GPS-ka. Sidee baan u sixi karaa qaladkan?
Hagaag, way adagtahay in la ogaado. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in labada kooxba ay isku mar aruurinayeen xog isku mid ah, in waqtiga uu ahaa isku xaalad, in saadaasha la mid ahayd, in salku runtii lahaa soo dhaweyn wanaagsan.
Fadlan, waxaan doonayaa inaan sameeyo dib u hagaajin waxaanan helayaa qalad kaas oo leh:
Marka la baarayo faylka loo yaqaan 'xxxxxxxxlikw file', lama helin shey u dhigma khariidadda qaabaynta faylalka.
Waxaan runtii u qaaday dhammaan tixgelinnada la socota sahanka, mana garanayo waxa qaldan. Xakamaynta tayada ayaa kaa baxaysa adiga oo aan qiimo lahayn Laakiin sida aan u sameeyo si saxan wax ka yar mitirka.
Su'aal kale, haddii aan rabo inaan ku dhiso waddooyin, waddooyinka xawaaraha ay tahay in la tago max, si sax ah ayaa ugu fiican.
geologist isagu wuxuu leeyahay:
Hello qof walba, ka eeg haddii aan caawin kara, soo iibsadaan 6 mapper mibile ah, laakiin ma aysan yeelan my code, Ashtech waa inaysan aad u ma ii furfuraya, oo idinka mid ah dealer qaar ka mid ah halkan ogahay in kii i soo Monterrey ama wax kasta oo kaa caawin kara ehelada
The Pro Mobile Mapper mar dambe for sale waa, laakiin wuxuu isticmaalayaa cable la mid ah in xitaa CX waxaa loo qeybiyaa in kasta oo dukaanka Magellan / Ashtech / Topcom, waxaad ka heli dealer Ashtech ee dalka.
Ronald ZS isagu wuxuu leeyahay:
g! Waad ii sheegi kartaa noocee ah xarkaha fiilada korantada moobiillada ay adeegsato maaddaama sheybaarka isku xidha anteeno-ka ee promark3 uu weyn yahay oo uusan ku habboonayn. Xagee ka heli karaa hadaad hayso macluumaad.
Waxaan fahamsanahay in gargaarka uu helo rover, maadaama anteenadu tahay in la hagaajiyo tayada soo dhawaynta marka laga hor tago caqabadaha, halka salka uusan laheyn dhibaatadaas sababtoo ah waxaad ugu tageysaa meel xoogaa cad; way haysaa wayna uruurineysaa markay beddelato satalaytka. Caawimaad aad u yar ayaa laga helaa anteenada.
Waxaan haystaa labo khariidad gawaarida gps qadiyadeyda su'aasheyda waxay tahay in ay ka caawiso labadaba saxnaanta anteenada dibadda.
haddii aan ka tago midda saldhigga waxaa laga tagi karaa antenna ansax ah, laakiin sida saxda ah waa xakamaynta xogta xogta ee gps ee u shaqeeyay sida rover. Ama haddii aysan suurtagal ahayn in lagu xiro anteenada dibadda ee gps ee ku yaal saldhigga.
Mahadsanid Juan Carlos. Ku-biirintaadu aad ayey qiimo u leeyihiin.
marka ugu horeysa ee aad u hambalyeeysid blog-kaaga ayaa bixinaya talooyin aad uwanaagsan, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo caddayn.
in Mexico laba nooc oo mobilemapper6 leh oo aan post-processing waa suuq, ee post-processing muhiim ah haddii la helay ka dib sameeyaan iibka qalabka leeyahay qiime, sida USD 500 ah.
sidaad u tidhaahdaan mid mm6 aan lagu salayn karaa Mexico aad link to RGNA INEGI, adigoo isticmaalaya badhanka si aad u hesho xogta tixraaca ka website a, laakiin shirkadaha isku mid ah (magellan) ma ku talinaynaa in aad kor u qaad, waayo, postprocessing ka sii fog ka 200km, aan ku noolahay Xalapa, Veracruz iyo saldhiga ugu dhow waa magaalada Mexico ee 227km garoonka diyaaradaha si magaalada waa out of kala duwan.
antenna The hagaajinaysaa soo dhaweynta (taas oo ka caawisaa tirada satalayt oo waa mid aad u fiican goobaha koobna), laakiin daruuri ma aha in ay sax meelo furan, waxaan idinku leeyahay, sababtoo ah ee Mexico, nin on internet iibiya antenna ah map60cx ah garmin oo sheegay in browser this waa antenna in aan submeter post-processing ama receptors 2, sidaas samaynta OmniSTAR suuqa, waxaan la yaabanahay.
qofka kale ee Oaxaca taxaddar waxa aad u sheegi, marka hore la POLYGONAL GPS ma loo baahan yahay in ay yihiin saldhigyada kaabayaal gelin guud ee saldhigga oo waa goobaha ay u radiate la total saldhigga, laakiin sidoo kale sida muuqata u maleeyo isu geeyo, isha waxaa laguma talinayo in GPS submeter la isku daro iyo guud ahaan saldhigga millimetric, ku filan in ay sidoo kale xusuustaa in qaladka GPS a ku quruxsan, waa 1.5 in goor 2 xy.
Ugu dambeyntii qofka raba in uu fuliyo REPLANTING, mm6 waa submetrically KALIYA dib-loo-shaqeeyay, marka la fulinayo dareenka leh qadar SBAS, ie mitir.
Salaan ka soo kaabashka ah ee la yiraahdo Verapruz mexico.
Hi Pablo, Waxaan waraaqahaaga u diray wakiil ka socda Ashtech / Magellan ee Bartamaha Ameerika kuwaasoo isku dayi doona inay ku caawiyaan. Waxaa lagu siin doonaa lambarka taxanaha ah ee qalabka.
kaalin isagu wuxuu leeyahay:
Hada, fadlan iigu sheegi kartaa halka aad ka heli lahayd khariidadda jilicsan iyo koodhka ka dambeeya ee MM6. Halkan suurtagal ma ahan halkan Colombia. Waxay ii sheegaan inaanu u direyno qalabka guriga Magellan. miyay tahay inaanan dalban karin oo aan isku dhejin karo? Ma leedahay wax xiriir ah ee Mareykanka oo i caawin kara?
Waad ku mahadsantahay caawimadaada.
Aynu aragno, wax yar baan wareersanahay. Wadar ahaan waxaad leedahay 2? Midkood si fiican ayuu u shaqeynayaa kan kalena waxbaa qaldama, sida aan fahamsanahay.
Xaashida wareega ee '6 mobile' ma hagaajin karto saxnimadeeda lafteeda. Waxay u baahan tahay mid aasaasi ah, tan aasaasiga ahna ma noqon karto maan-guur gacmeedka '6', laakiin mid kale oo aan hore u soo xushay.
Siyaabo kale oo loo sameeyo hawlaha dib-u-dhiska, taas oo aan ka soo horjeeda xogta mid ka shaqeeya saldhig u ah isticmaalka database Rinex ama kuwa laga helo internetka, sida sharaxay halkant. Waxay ku xirnaan doontaa meesha aad joogto iyo haddii Machadka Juquraafiga ee dalkaagu leeyahay xog ka dhan ah waxa loo baahan yahay in lagu celiyo.
waad ku mahadsantihiin faalladaada G!, gps kale waa isku mid (waa la filayaa) mashiinka mobile 6 laakiin markaan samaynayo sahaminta qaar iima sheegin wax tallaabo, sidaas darteed waa sida aan la isticmaalin. Waxaan samayn karaa xariiqyo badan oo is dul saaran laakiin waxaan ogahay in ay leeyihiin qalad qadar ah, sidee baan u kordhi karaa saxsanaanta? Waxaan haystaa oo kaliya khariidadda mobile si ay u barnaamijka, inkasta oo ay sameeyeen halkaas oo ay iibsadeen. Miyaan u baahanahay barnaamij dhexdhexaad ah? . mahadsanid faallooyinka
GPS-ka moobiil gacmeedka '6' uma shaqeyn karo saldhig saldhigiisu yahay, sida rover. Marka si loo wanaajiyo saxsanaanta, waa inaad heysataa mid taageeraya saldhig ahaan:
Waxyaabaha soo socdaa waxay u shaqeyn karaan saldhig ahaan: Mobile Mapper Pro, Mobile Maper CX, Promark 100, Promark 200, Promark 100, Mobile Mapper 10 ama Mobile Mapper 200.
Marka waxa aad sameyso, waa in qalabka u shaqeyn doono saldhig, waxaad dejisan doontaa taas oo u shaqeyn doonta sida. Waa inay ahaadaan isla waqtiga iyo taariikhda, oo ay bilaabaan qabashada xogta isla waqtigaas; Saldhiggu waa inuu ahaadaa meel go'an, oo waxaa lagu talinayaa inaad ka tagto qabashada xogta ku saabsan daqiiqadaha 20 kahor iyo daqiiqadaha 20 ka dib sahanka rover.
Qalabkan 6 mobile wuxuu kuu adeegi karaa sida rover, markaa marka aad dhameyso xogta, qaadashada iyo dib u soo celinta waxa la qaaday MM6 ka soo horjeeda saldhigga go'an, iyadoo la adeegsanayo Office Mobile Mobile Office.
Waxaad iigu sheegeysaa inaad haysato isla eg, sidan oo kale? Waa maxay nooca? Waxay sharraxaysaa sida ay tahay in aysan ku jirin cabbiraad iyo haddii aad ka hadlaysid koox kale ama had iyo jeer ku saabsan mm6.
Waxaan hayaa laba mapper mobile '6, waa koox aad u fiican. Su’aal markaan falanqayn ku samaynayo sidee ayaan cadaadiska u kordhiyaa? Waxaan hayaa GPS kale, laakiin taasi iima siinayso wax qiyaas uun ah isku-duwe joqoraafi ahaan. Waxaan jeclaan lahaa faallooyinka qaarkood
aad u wanaagsan maalin Mr ad, fadlan Waan sharrixi karaa habka of sida loo sameeyo saarista bar ah .. mm6 a, Anigu garan maayo sida ay gacanta ku soo saaraa kaliya aasaaska ku doonayaan in ay goolal dhibcood, kuwaas oo azimuth ee koorso kasta oo wada, waxaan kuugu mahad naqayaa horumariyo u weecday .... tabaaskoo Mexico ..................
ESTUARDO TORRES isagu wuxuu leeyahay:
KOOWAAD KU SAABSAN SHAQADAADA
'SORRY SIDA AAD U HESHI KARAA FAA'IIDEYSIGA, KA HELI KARTAA KORONTADA.'
SIDEE AYAAD KU QIIMIN KARO HEERKA KA DHACAYA MAPILE MOBILE 6
sababtoo ah Colombia waxaan ku siinayaa ikhtiyaar si aad u raadiso idaacadaha oo aanad u eegin, waxaad yeelan doontaa inaad qiyaasto doorasho.
Hello Irving, waxa ku yaal magaalo iyo gobolka Mexico aad ku taal.
Irving isagu wuxuu leeyahay:
Hello Waxaan rajaynayaa in aad si fiican u HELI waxaan LAGU fiirinaya Forum IYO WAA BUENISIMO ayaa A MOVILEMAPPER 6 OO AY ILA XAFIISKA QOF uu ku ciyaaraayey iyo lafta quful THE geliyaan A IYO waxaan GELIN KARAA KOOXDA doonayay in CAAWIMAAD RAADSO QOFKA LAAKIIN iN aAN u iibin aan mar dambe la helay oo ay doonayaan in ay gaaraan TAAGEERADA MAGELLAN LAAKIIN aAN wAX XIRIIR MEXICO QOF KULANKA iga caawiyaan SIDA LOO furo karin MOVILMAPPER aMA eE kASTA TALEEFANKA TAAGEERADA MEXICO ... mahad ka hor
Raul, haddii aad soo iibsatay qalabka cusub, waxaa ku soo baxaya DVD ah oo talaabo talaabo talaabo ah ku qaadaya taleefanka.
Ugu horeyn waan kuu hambalyeynayaa waxaanan kuugu mahadnaqayaa macluumaadka aad na siiso. Waxaan haystaa gps magellan promises3 iyo software-ka dib-u-dhajinta waa GNSS SOLUTIONS, haddii aad noqon lahayd mid naxariis leh sida i tilmaamaya habka loo marayo ka-shaqeynta xogta laga qaaday berrinka.
PABLO PINTO isagu wuxuu leeyahay:
Salaan isweydaarsi, miyaad ii sheegi kartaa sida ugufiican ee loo adeegsado MobileMapper Pro, si aan u fuliyo MACLUUMAAD shabakad koronto? (Tabaha ama farsamooyinka, talooyinka) Waxaan horey u haystay wax kasta warqad (iskuduwaha fallaaraha) oo waxaan u baahanahay inaan ka dhex helo goobta.
Waad ku mahadsantahay caawimadaada
Waxaan dhawaan iibsaday MM6 ah, laakiin trababa la software MobileMapper oo bilaabmay kala sooc lahayn ka dib markii aan ku rakiban 7.1.1 ArcPad iyo sii samaynayaan waxyaalo yaab leh .... Ma isku mid baa ku dhacay qof? Horey u soo dir si aad u hubisid alaab-qeybiyaha ...
shahaadada abaalmarinta isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, fadlan qof kale oo i caawin kara
Markii la bilaabayo sixitaanka hawsha kadib, waxay muujineysaa cilad muujineysa in feker la mid ah faylalka qaabka aan la helin oo aan sixitaanka la qaban
Waxaan rajeynayaa inaan helno caawimo, mahadsanid
Waa inaad la xiriirtaa wakiilka rasmiga ee Magellan ama Ashtech ee wadankaaga, iyo kan ku caawin kara.
Dhanka, wadankee ayaad kujirtaa? Koonfurta Ameerika?
lennin isagu wuxuu leeyahay:
saaxiib Vera waxaan gelin a password, GPS oo wanaag ma utilisado e sida bilood 3 iyo markii loo isticmaalo Ma xusuusan password iyo buugga passwords aan laga badiyay, GPS ka iibsan xirmo oo ay leeyihiin dhammaan dokumentiyada iibsiga , ma aha sida tii desboquiar rajeynayaa ma i caawin kartaa
Waa hagaag, ma xasuusto khaladkaas.
Su'aal dheeraad ah ma noqon doonto in tirooyinka dhibcaha lagu celiyo kalfadhiyo kala duwan?
Isku day inaad ku soo qaadato macluumaadka kalfadhiyo gooni ah si aad u ogaatid in taasi ay tahay dhibaatada.
Waa hagaag Mr. Geofumadas, way muuqataa in mararka qaar markaan samaynayo wareejinta Software-ka MobileMapper Office, taas oo ah, soo dejinta feylka MobileMapper Pro GPS illaa kombuyutarka, waxaan helaa farriin oranaysa: »QODOBADA KHATARTA AH EE XULASHADA». Sideed u sixi kartaa dhibaatadan? Ama xaaladdii ugu xumayd, waxba lama wareejiyo.
Maxay dhici kartaa ???
Waad ku mahadsantihiin caawimaad qiimo leh.
Waxaan fahamsanahay in iibsigaadu ay ka mid tahay disk, sidaa daraadeed iyada oo loo marayo ActiveSync waxaad dib u cusbooneysiin kartaa codsiga Windows Mobile.
Hernan contreras isagu wuxuu leeyahay:
Hello qof walba, quisera inuu i caawiyo maxaa yeelay, GPS 6 mapper mobile iyo baan ka heli shaashad si ay u dejiyaan password a iyo ma oga taas oo, sida wiilkayga saaray password a iyo xusuusan, marka waxaan isku dayi in ay ku xidhmaan iyo gps in pc waxaan u hesho Farriinta soo socota: Qalabka ayaa xiran. in ay ku xidhmaan computer this, ama waafajinta, qabtaan kooxda sugida s.
markaa maxaan sameeyaa, sida aan u furo ama dib u celi gps, markale gps waa mid cusub, tanina waxay ku dhacdey inta lagu guda galayo.
raymundo granados zavaleta isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan leeyahay 6 a mm mm pro iyo dhawaan helay rabaan in ay sameeyaan postprocessing laakiin saldhigga tixraaca faylka abuuraa mm ah pro iyaga ku dar sida xogta sida xawliga ah u tixraac ma taageersana, this abuuraa files la kordhiyo xxx.285 oo codsanaya ii kala duwan yihiin haddii aan ku dar sida files oo dhan *. * ii sheegayaa format aan la garanayn, waxaan kula talin kari waayay
Abelardo isagu wuxuu leeyahay:
asxaabteyda, waxaan idinka codsanayaa inaad i hagtaan waxa ku saabsan qalabka aan kugula taliyo inaan sameeyo cabirrada dhul siman iyo mid dabaq ah, kuwa ugu saxsan uguna dhow meelaha dhabta ah, -nawaxayna ugu yar yihiin iyo qiyaasta ugu badan-
Saldhiggu waa inuusan dhaqaaqin, oo wuxuu noqon karaa meel kasta, daruuri ma ahan goobta sahanka. Marka waxaad dhigtaa meel aamin ah oo nadiif ah.
Waxaa lagula talinayaa in aad soo jeediso daqiiqado 15 ka hor inta aanad bilaabin sahaminta oo ka tago daqiiqado 15 kadib, sidaas darteed waxaad isku ururin kartaa akhriska.
Hello Mr. Geofumadas, Waxaan kugu salaamayaa CD. Waxaan ka mahadcelinayaa Oaxaca, waan kugu mahadnaqayaa inaad wadaagto aqoontaada
Su'aasha waxa ay tahay oo ku saabsan ururinta xogta la laba gps for qalab postprocessing kor u database la hagaajin doona gudaha polygonal xiran ama ku talaabsan doonaa in ay qaataan qaar ka mid ah dhibcood geesoolayaasha iyo in ay dhacdo geesoolayaasha furan, waayo, nidaamka biyaha ah halkaas oo qalabka aasaasiga ah la dhigi karo
Aynu aragno haddii aan si sax ah u fahmay:
Waxaad u baahan tahay inaad lahaato laba koox oo isla kor qaadaya waqti isku mid ah, mid ka mid ah waa inaad qeexdid saldhig, mid kalena sida rover. Sidan, midkood ayaa ururin doona data ceeriin, iyo xogta kale ee salka.
Xogta qadiimka ah waxaa lagu keydiyaa Mobile Mobile Job, sidaas darteed kordhinta .mmj halka kooxda oo kor u qaadaysa xogta saldhig, ay ku badbaadin doonaan kordhin kale laakiin markaad isticmaasho Xafiiska Maareynta Mobile Waxaad ku dhajin kartaa iyaga inay dib u habeeyaan ilaa iyo inta ay kudhacayaan waqtiga qabashada.
Su'aashaada ma tahay, in haddii xogta la qaato sida qashinka loo bedeli karo saldhiga?
MG! isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, Sr Geofumadas, markii ugu horreysay ee aad hambalyo u dirto shaqadaada farsamada iyo baadhitaankaba, waxaanad kuugu mahad celineysaa naftayada oo dhan oo xiiseynaya geomatics iyo dhamaan cilaaqaadyadaada.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka jawaabo su'aasha ah, si ay u soo bixi xogta laga mapper mobile xad pro waa .MMJ, fikradda ah waa in ay sameeyaan processing post a, sidaa darteed waxaan doonayaa in aan ogaado doorasho ee format xogta inay soo bandhigto .grw fogfog sida xogta cayriin waqtiga postprocessing, Waad ku mahadsan tahay Salaamaha atension aad.
Waxaad ka soo dejisan kartaa bogga Ashtech
wanaagsan Gacaliye, ma i caawin kartaa adoo iiga sheegaya meesha aan ka heli karo nidaamka nidaamka boostada, sababtoo ah MM6 ee aan iibsaday kamay iman tan iyo sidoo kale Mapping. Waxay iiga sheegaan qiyaasaha qaarkood ee loo baahan yahay in la helo si ay u rakibaan software-ka. Anigu dhab ahaan waan xirxiray ...
Hirgalinta, Mobile Mapper Pro iyo Promark3 xogta dib u dhigi kartaa nidaamka Mashruuca Mobile Mobile 6.
MM6 waxaa in yar ka caawiya anteeno dibadeed. Tusaalaha waxaa loo qaataa anteeno la'aan.
Roberto Jaimes isagu wuxuu leeyahay:
Salaan ka timid Michoacán Mexico:
Marka hore, hambalyo ku saabsan xirfadlaha boggaaga.
Waxaan haystaa barnaamij khariidad ah Mobile Mobile iyada oo furaha farsameynta boostada, ma suurtagal tahay in la isticmaalo iyada oo lagu darayo MM6? Dhibaatooyinka ma la qabtaa barnaamijka u dhexeeya iyaga? Su'aashadayda ugu dambeysa waa haddii leylinta qaadashada xogtan oo dib loo habeeyay ay ku jirto cutubka sida ay timaado ama haddii ay ka caawineyso saxnaanta anteenaha dibadda ah?
Waad ku mahadsantihiin dareenadaada wanaagsan.
Saaxiibo qaali ah, waxaan haystaa khariidadda moobiilka xNUMX 6 shaqooyinka la qabtay waxaa lagu soo bandhigayaa mitir la hubiyey, waa koox aad u fiican oo hadda waxaan ku raaxaystaa maaha kaliya mashiinka mobile, laakiin sidoo kale mitirka gps.
Haa, waqtiga qabashada waa in la sameeyaa, iyo sidoo kale shuruudaha sida aragga oo liita. Kani waa kiiska aad ugu dhowdahay dhisme, dhisme leh muraayadaha indhaha ama miisaska.
Xaqiiqdii aan ku hadlo, mitir waa dib udiyaarin, ma aha xogta qarsoodiga ah.
Imtixaannada aan sameeyay, oo leh darbiyo tirooyin ah 30, iyo degaannada magaalooyinka (ma ahan dhismayaasha cirka), mar hore ayaan ku guuleeystay dib u dhiska, inta u dhaxaysa 80 centimeters iyo qalabka 1.20.
Wic isagu wuxuu leeyahay:
Waqtiga qaadashada xogta si toos ah ma u saameeyaan saxnaanta xogta?
Miisaaniyadda lagaga hadlo wax ka yar 1m, ayaa ku jira dhammaan cabirka iyo xaalad kasta? ama keli keli keli keli ah iyo xaalado aan fiicnayn?